LLC "Aksentis" - Magazine "Nidaamka Baradhada"
Sanadihii la soo dhaafay, LLC Aksentis wuxuu si joogto ah uga mid ahaa hoggaamiyeyaasha soo saarista baradhada abuurka ee Xiriirka Ruushka.
Shirkaddu waxay hawsheeda bilawday 2012, bilawgii, aagga wax lagu beero wax aan ka badnayn 200 hektar oo baradho la iibsan karo ah.
Waqtigaan la joogo, qaab dhismeedka meelaha lagu beeray waxaa ka mid ah in ka badan kun hektar oo baradho abuur ah, in ka badan seddex kun oo dalagyo sharci darro ah, iyo sidoo kale dalag dalag u ah salka calafka.
LLC Aksentis waxay leedahay cilmi baaris xoog leh iyo saldhig wax soo saar si loo hubiyo wareegga buuxa ee soosaarka abuurka. Nidaamka soo saarida abuurka aasaasiga ah waxaa ka mid ah sheybaarka mikropropagation-ka oo lagu qalabeeyay qalabka ugu casrisan iyo dhisme lagu koriyo oo casri ah, kaas oo u ogolaanaya in la helo ilaa 650 minitubers sanadkiiba.
Marxaladda xigta ee soosaarka abuurka waa xanaanooyinka wax soo saarka abuurka asalka ah, kuwaas oo bixiya ka ilaalinta ugu badan ee dhirta ka timaadda saameynta waxyaalaha noolaha iyo abiotic. Xannaanooyinka waxaa lagu qalabeeyaa nidaamyo waraab waxaana laga ilaaliyaa vector cudurka. Soosaarida miraha baradhada ee caanka ah iyo taranka waxaa lagu fuliyaa iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyada ugu wax ku oolka badan uguna habboon deegaanka, taas oo hubineysa wax soo saarka ugu badan ee mugga sare leh isla markaana fuliya dhammaan hawlgallada waqtiga ugu habboon.
Marka lagu daro tikniyoolajiyada isku dhafan ee lagu beero baradhada abuurka, oo ay ku jiraan wareegga dalagga, beerashada carrada, bacriminta iyo nidaamyada ilaalinta dhirta, tusaalooyinka ugu casrisan ee mashiinnada beeraha adduunka, oo ay ku jiraan noocyada John Deere, Grimme, Lemken iyo kuwa kale, gacan ka geysashada hirgelinta qorshooyinka hami leh.
Aasaaska helitaanka alaab tayo sare leh, iyo waliba wax soo saar, waa dhaqan soo saar sare, oo ay kujiraan dhowr arimood oo muhiim ah. Ugu horreyntii - maaraynta wax soo saar wax ku ool ah dhammaan heerarka waxqabadka, iyo sidoo kale in diiradda la saaro natiijada ugu dambeysa, fahamka istiraatiijiyadda iyo geeddi-socodka dhammaan kaqeybgalayaasha. Qeybtan waxaa sidoo kale ku jira qorsheynta iyo ka-habeynta, falanqaynta joogtada ah iyo ka shaqeynta meelaha ugu nugul, hal-abuurnimo joogto ah iyo horumarinta xalal cusub. U hogaansanaanta howlaha farsamada, qawaaniinta, shuruudaha, xaaladaha wax soo saarka iyo ilaalinta shaqaalaha, heerarka dowlada iyo waajibaadka qandaraaska, shuruudaha iyo qawaaniinta, iyo waliba anshaxa shaqada sidoo kale waa muhiimad weyn.
Muhiimadda mudnaanta waxay la shaqeyneysaa ilaha ugu weyn ee shirkadda - shaqaalaha. Waxaan abuuraynaa oo horumarinaynaa koox xirfadlayaal ah iyo dad isku fikrad ah.
Tan awgeed, dhiirigelinta karti ee shaqaalaha, dhiirigelinta dadaallada, ka-qaybgalka geeddi-socodka mowduuc kasta oo ka qayb qaadanaya, suurtagalnimada is-faham iyo is-muujinta qof walba, dimuqraadiyeynta xiriirka maareeyaha iyo shaqaalaha ayaa muhiim ah.
Marka laga soo tago danaheena gaarka ah, shirkadeena sidoo kale waxay tixgelineysaa danaha ganacsiga ee la-hawlgalayaasheenna iyo macaamiisheenna, maadaama iskaashi wanaagsan oo guul leh uu aasaas u yahay xiriirka labada dhinacba faa'iidada u leh, furfurnaanta iyo daacadnimaduna waa mabda'a mashaariicda muddada-dheer la wadaago. .
Sidaa darteed, hab hal abuur leh oo loogu talagalay teknolojiyadda iyo abaabulka shaqada, casriyeynta joogtada ah iyo hagaajinta tiknoolajiyada ee ku saleysan is-dhexgalka, iyo sidoo kale dabeecad xasaasi ah oo ku wajahan wada-hawlgalayaasha iyo shaqaalahooda, waxay u oggolaaneysaa helitaanka tilmaamayaal sare marka la eego mugga wax soo saarka iyo tayada baradhada abuurka.
Tags: Gobolka Nizhny Novgorod
ShareShare55Share39Si aad u soo diri